BBC Somali - Maqal iyo Muuqaal - Cali Ameeriko oo ka hadlay AMISOM
Cali Ameeriko oo ka hadlay AMISOM
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 31 Oktoobar, 2012, 17:26 GMT 20:26 SGA
Danjiraha Soomaaliya ee Nairobi ayaa sheegay in maamul u dhisidda Kismaayo ay tahay shaqo u taal dowladda Soomaaliya, balse aanay ahayn mid u taal IGAD ama AMISOM.
Danjiraha Soomaaliya u fadhiya Nairobi, Maxamed Cali Nuur Ameeriko
Danjiraha dowladda Soomaaliya u fadhiya magaalada Nairobi ayaa sheegay in maamul u dhisidda magaalada Kismaayo ay tahay shaqo u taal dowladda Soomaaliya iyo dadka deegaanka, balse aanay ahayn hawl u taal IGAD ama AMISOM.
Danjire Maxamed Cali Nuur Ameeriko oo u warramayay BBC ayaa sheegay in AMISOM ay gacan siiyeen dowladda Soomaaliyeed taasina ay ka mahadcelinayaan, laakiinse waxa uu meesha ka saaray in aanay weligood joogeyn Soomaaliya, oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay kala wareegi doonaan ammaanka guud ee dalka.
Dhinaca kale Danjiraha waxa uu sheegay in maamul u sameynta gobollada Soomaaliya ay leedahay dowladda Soomaaliya.
Dhawaan ayaa Midowga Afrika uu sheegay inuu doonayo in door rayid ah uu ku yeesho Soomaaliya oo uu keenayo saraakiil ka qayb qaata maamul u samaynta Soomaaliya.